Ciidamada diidan muddo kororsiga oo ka horyimid inay Muqdisho ka baxaan | Dhacdo
Home Wararka Maanta Ciidamada diidan muddo kororsiga oo ka horyimid inay Muqdisho ka baxaan
Ciidamada diidan muddo kororsiga oo ka horyimid inay Muqdisho ka baxaan
Warbaahinta ayaa fahamsan in Guutada 7aad ay fashilisay hawlgalkii Dowladda Federaalka ku dooneysay in lagu soo qabto Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Senator Cabdi Xasan Cawaale (Qaybdiid) oo ka tirsan Senatorada Golaha Aqalka Sare ee Baarlamaanka Somaliya ayaa Arbacadii sheegay inuu socdo qorshe la doonayo in lagu carqaladeeyo is afgaradka laga gaaray arrinta doorashada, isagoona Guddoonka Golaha Shacabka iyo Xildhibaanadaba uga digay inay carqaladeeyaan amaba xilka ka tuuraan Ra’iisal Wasaare Maxamed Xuseen Rooble.
“Kama bixi doono fariisimaha aan ka sameysanay magaalada, haddii la rabo inaan ka baxno waa inay madaxda tagtaa Teendhada Afisyooni, oo halkaasina uu shirka wadahadalada ka furmo. Ninka ku fekeraya inaan xeryaha ku laabano, iyadoo aan heshiis la gaarin waa nin riyooday.” Ayuu yiri Faarax Jareere.
Previous articleIngiriiska oo baaq u diray Madaxda Soomaalida
Next articleGudoomiyaha Degmada Baraawe “Isku day dil ayaan ka badbaaday”